Ogaden News Agency (ONA) – Faallo: Hafaryadii Joogtada Ahayd ee Shacabka Lagu Hayay Waxaa Kadaran Sumcad Xumida & Bahdilka Kale.
Faallo: Hafaryadii Joogtada Ahayd ee Shacabka Lagu Hayay Waxaa Kadaran Sumcad Xumida & Bahdilka Kale.
Beesha caalamku waxay gar-waaqsatay inaysan sii jiri doonin wax Itoobiya layidhaahdo oo Tigrey ay majaraha u hayaan. Wadamada deeqda bixiya waxay aad uga wel-wel sanyihiin xaalada maanta Itoobiya kajirta iyo mustaqbalka madoow ee soo food saaray Itoobiya.
Waxaa shirarka iyo fagaare yaasha caalamka hadheeyay bilihii lasoo dhaafay xaalada murugsan ee Itoobiya. Hay’adaha xuquuqda aanaha u dooda ayaa aad uga dayrinaya dhibaatooyinka kala duwan ee shacabka Itoobiya ay ku hayaan Ciidanka Woyaanaha oo xasuuq iyo cadaadis baahsan ka gaystay deegaamo kala duwan oo wadanka kamid ah sida Ogadenya, Oromiya, Gambella, Konso, iyo Axmaarada.
Shacabka Somalida Ogadenya ayaa dhibaatadan maanta Oromada & Axmaarada kicisay usoo dhabar adaygay 25-kii sanee lasoo dhaafay. Marxalado kala duwan oo aad u qalafsan yuu shacabka Somalida Ogadenya kasoo gudbay. Dhibaatadan maanta beesha caalamka kaga qaylisiisay ayaa u gaar ahayd bulshada rayadka ah ee Somalida Ogadenya.
Taliska Woyaanaha oo guul-darro isdaba joog ah kala kulman Ogadenya kuna fashilmay riyadiisii ahayd inuu ka faa’iidaysto khayraadka Somalida Ogadenya ayaa samaystay maamul ku sheeg naxariis daran oo loo wakiishay cadaadiska iyo cabudhinta shacabka. Maamulkan oo aad u liita ayaa hafaryo iyo hagar-daamo joogto ah ku haya shacabka. Waxaase taas kasii daran talaabooyinka Maamulka maqaar-saarka ah ee Jigjiga uu miciin biday iyadoo soo baraarugay xilli ay xeedho iyo fandhaal kala dheceen, wax Itoobiya la yidhaahdana aysan maanta jirin.
Qaar kamid ah shacabka Somalida Ogadenya ee qurbaha ku dhaqan oo xigto iyo qoysas ay ka joogaan wadanka Ogadenya ayaa amar lagu siiyay inay banaanbaxyo iyo abaabul lagu taageerayo taliska Woyaanaha ee taagta daran sameeyaan. Dadkan ayaa taleefano loogu hanjabay hadaysan ka qaybgalin banaanbaxyada noocaas ah inay xigtadooda Ogadenya joogta ciqaab adag mutaysan doonaan.
Waxaa nasiib darro ah in odayaal iyo hooyooyin cimri ah ay meel madhan intay iskugu soo baxaan iyagoo masaafooyin aad u fog fog kasoo kicitimay ay maanta taageero qasab ah ooysan raali ka ahayn kuna qanacsanayn ku muujiyaan inay taliska TPLF taageersan yihiin taasoo ay tahay u jeedada ka dambaysa in bahdilkii iyo hafaryadii joogtada ahayd ee shacabka Somalida Ogadenya lagu hayay loogu daro sumcad xumi iyo bahdil kaloo dheeraad ah taasoo ay taariikhdu xusi doonto ninkii cimrigiisu gaadho.